Ndị egwuregwu dị ọcha | ECommerce ozi ọma
Encarni Arcoya | | eCommerce, Ọzụzụ ECommerce
Ndị egwuregwu dị ọcha Ha nọ n'ọnọdụ a, azụmahịa ahụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ chọrọ naanị njikọ ịntanetị iji ree, ọ bụ ezie na ọ bụghị ụlọ ahịa anụ ahụ, ọ bụ ya mere ebumnuche nke "dị ọcha" ma ọ bụ "ọcha" ebe ọ bụ na ihe ndị a chọrọ iji malite ire ere dị ole na ole, nke na-eme ka ha gbanwee ma gbanwee maka mgbanwe.
Privalia ma ọ bụ Groupon bụ ụlọ ọrụ abụọ ihe ịga nke ọma Naanị ihe ha na-eme bụ ire ngwaahịa ndị ọzọ na ntanetị mana iji onyinye dị mma yana karịa ụdị na ụdị dị iche iche ga-agaghị ekwe omume ịchọta belụsọ ma ị gaa n'ụlọ ahịa site na ụlọ ahịa. Amazon, Asos ma ọ bụ Alibaba Ha anaghị emepụta ma na-ejikwa nnukwu ngwongwo ha na-echekwa ma na-ekesa n'ụwa nile, nke na-eme ha ọ bụghị naanị ndị na-ere ahịa ịntanetị kamakwa ha nwere ịrụ ọrụ nke ọma ikpo okwu na lọjistik usoro nnukwu mmasị ịre ihe ọ bụla, onye ọ bụla na ebe ọ bụla.
Azụmahịa ndị ọzọ dịka Instagram ma ọ bụ akụkụ anọ Ha na-enye ọrụ dị iche iche ka ụlọ ahịa anụ ahụ adịghị mkpa, agbanyeghị nke ahụ apụtaghị na ha enweghị akụrụngwa na ọfịs ma ọ bụ Isi ụlọ ọrụ iji rụọ ọrụ ebe ahụ.
Ụdị nke a e-commerce nwere ike ịbụ ihe kachasị achọta na ịntanetị na ọ bụ nhọrọ kachasị mma ịmalite azụmaahịa dị n'ịntanetị, agbanyeghị na agbanyeghị na ọ gbagwojuru anya karịa ịmepụta ụlọ ọrụ, a ga-enyerịrị nlezianya anya na weebụsaịtị yana ụzọ a ga-esi wepụta ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ na mgbakwunye na usoro ahia iji dọta ndị na-ege ntị nwere ọtụtụ ntanetị ịntanetị ọzọ.
1 Njirimara nke ndị egwuregwu dị ọcha
1.1 Ọnụnọ naanị na ịntanetị
1.2 Ibelata ego na onyinye dị oke egwu
1.3 Nanị ọnụnọ n'ịntanetị ... kamakwa nke anụ ahụ
2 Ihe Nlereanya nke Ndị Ọcha Dị ọcha na azụmaahịa ọnlaịnụ na ntanetị
2.1 Ejiji ntanetị
2.2 Nnukwu ụlọ ahịa na ntanetị
2.3 Elektrọnik ma ọ bụ ụlọ ahịa dị iche iche
2.4 Adobe & ngwa agha
2.5 Ndị Egwuregwu dị ọcha: Pịa & Mita
Njirimara nke ndị egwuregwu dị ọcha
Ọ bụ ezie na echiche nke ndị egwuregwu dị ọcha amachaghị nke ọma, o doro anya na ụdị azụmaahịa a adịla gburugburu ụwa ogologo oge. Ọ dị mfe ịtọlite ​​ụlọ ahịa dị n'ịntanetị, na naanị n'ịntanetị, nke tinyeworị ya n'ime oge a. Ma olee àgwà ndị ọzọ ha nwere? Anyị na-agwa gị banyere ha:
Ọnụnọ naanị na ịntanetị
Ezigbo ndị egwuregwu dị ọcha, ya bụ, ndị nke mbụ, bụ ndị ejiri naanị Internet nweta dị ka ọwa ahịa. Nke ahụ bụ, ha anọghị na ụlọ ahịa anụ ahụ, ị ​​nwere ike ịzụta naanị site na njikọ intaneti.
Eziokwu na ọ bụ dị ọnụ ala karịa, karịa anaghị achọ itinye ego, wdg. ọ na-eme ya ọnụ ọnụ, dịkwa na enwere ike nwee azụmaahịa na-arụ ọrụ nke ọma.
Ibelata ego na onyinye dị oke egwu
Uzo ozo di iche-iche nke ndi n’egwuregwu di ocha metutara onu ahia ha. Ma, n'ihi na ha anaghị achọ nnukwu ego, ihe ha na-achọ bụ itinye ya ngwaahịa na ọnụahịa dị oke ọnụ, mgbe ụfọdụ site na ịnye ma ọ bụ mbelata ihe fọrọ nke nta ka ọ ghara ikwe ka ha nweta uru (nnukwu ahịa nke uru ole na ole ọ bụla dị mma karịa ahịa dị oke mma).
Yabụ, ọ na-achọ ịsọmpi mpi maka ọnụahịa ngwaahịa a. Maka, ọ bụrụ na ị na-achọ ihe ma hụ ụlọ ahịa abụọ nwere otu ngwaahịa mana ọnụ ahịa dị iche, ị gaghị ahọrọ nke dị ọnụ ala karịa? Onye ọ bụla na-eme ya, ọ bụ ya mere ụdị azụmaahịa a ji egwu ya.
Ọmụmaatụ, na nke Groupon, Groupalia…, ha na-enye gị ọrụ na ngwaahịa na knockdown ego, na ọtụtụ n'ime ha bụ ndị ezi mma, ma na ahịa na-eme ka ị ghara iguzogide.
Nanị ọnụnọ n'ịntanetị ... kamakwa nke anụ ahụ
N'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na ndị egwuregwu dị ọcha dị naanị n'ịntanetị, eziokwu bụ na nzụlite ha na-agbanwe. N'aka ozo, anyi siri na ahia emebere nani na intaneti wee bido inwe aru ike. Gịnị mere ha ji mee otú ahụ? Ọtụtụ na-ekwu na ọ bụ n'ihi ịchọ ijikọ ụwa dijitalụ na nke anụ ahụ.
Ndị ọkachamara ndị ọzọ na-akwado maka mmekọrịta chiri anya na nso nso na ndị ahịa, nke bụ ya mere e ji guzobe ụlọ ọrụ anụ ahụ nke na-enyekwu ya ọnụnọ.
Ihe omuma atu di otutu, Amazon bu otu n’ime ha, ya na ulo ahia di na America; ma ọ bụ ihe banyere Aliexpress, nke nwere ụlọ ahịa anụ ahụ na Madrid ma nwee ike ịga leta ya n'ụzọ dị mfe ịchọta ọ bụghị katalọgụ dum ha nwere, mana ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ngwaahịa.
Ihe Nlereanya nke Ndị Ọcha Dị ọcha na azụmaahịa ọnlaịnụ na ntanetị
Ọ bụrụ na echiche nke ndị egwuregwu dị ọcha edobeghị gị anya, ọ ga-ekwe omume na iji ụfọdụ ihe atụ ndị ọzọ ị nwere ike ịkọwa echiche ndị ị nwere. Typedị azụmahịa a abụghị naanị na ntanetị, ọ bụ ezie na ọ bụ ya kachasị. Kedu ihe anyị bu n'uche na nke ahụ? Ọfọn, enwerekwa nhọrọ, ọkachasị ọdịiche dabere na nke a, nke dị na ụlọ ahịa anụ ahụ.
Ka anyị na-amalite:
Ejiji ejiji n'ịntanetị bụ ihe kachasị mma na nke na-elekwasị anya na ọnụ ọgụgụ nke ndị egwuregwu dị ọcha. Ihe ọ na-ekwu bụ na enwere nyiwe nke ndị ọrụ nwere ike ịnyagharịa, lee uwe ma zụta ha n'otu pịa.
N'ezie, ọ na-achọ inweta ya Uwe kacha mma agaghị ekwe omume, Karịsịa n'ihi na a na-ebelata ụgwọ (ebe ọ bụ na ọ nweghị ụlọ ahịa anụ ahụ, ma ọ bụ mmefu sitere na ya, ha na-enyere ọnụahịa aka ịsọ mpi.
Kedu ụlọ ahịa ndị nwere ike daba na nke a? Ọfọn, dịka ọmụmaatụ, Asos. Ọ bụ otu n'ime ụlọ ahịa buru ibu maka onye ọ bụla nke na-enweghị ụlọ ahịa anụ ahụ, nke ahụ egbochighịkwa ya ịbụ otu n'ime ndị kachasị eleta na ebe ọtụtụ ndị na-azụta ihe n'ịntanetị. Ọ dị mfe ịlaghachi uwe ndị na-adịghị efe gị, yana ọnụ ahịa ezi uche dị na ya ha, emeela ka ọ bụrụ nke ama ama n'ụwa niile. Ihe atụ ọzọ nwere ike ịbụ Shein.
Nnukwu ụlọ ahịa na ntanetị
Ọ bụ ezie na Spain nke ka dị anya, eziokwu bụ na n'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, ha apụtala. Anyị anaghị ekwu maka ibe weebụ nke nnukwu ụlọ ahịa dịka Carrefour, Lidl, Mercadona ... nke nwere nhọrọ nke ire n'ịntanetị, n'ihi na ha nwere ụlọ ahịa anụ ahụ. Ha bụ nnukwu ụlọ ahịa ndị dị na ntanetị.
Otu ihe atụ nke ndị a nwere ike ịbụ Ulabox, n'agbanyeghị na agbanyebeghị nkwadobe na mba anyị, a na-anụkwu ya, ọkachasị n'ihi na ọ nwere katalọgụ sara mbara yana ohere ịkesa ihe ị jụrụ n'ime awa 24.
Elektrọnik ma ọ bụ ụlọ ahịa dị iche iche
Amazon, Aliexpress, Wish, Joomla ... ha odi ka odi nma? Ha bụ ibe ma ọ bụ ngwa nke na-enye gị ohere ịzụta ụdị ngwaahịa dịgasị iche iche, ọtụtụ n'ime ha ọbụna na-anọghị na Spain, yana ị na-eji obere clic.
Ha na-adabere na zuru ụwa ọnụ n'ịntanetị ma ha so n’ime ndị akacha eji, ya na ọtụtụ ndị ọzọ anyị akpọpụtabeghị.
N'ezie, ụdị a nwere ike ịgụnye ụlọ ahịa niile dị n'ịntanetị nke emepụtara na enweghị nkwado anụ ahụ; ma ọ bụ ọbụna ndị na-eji dropshipping.
Adobe & ngwa agha
Formdị a nke ndị egwuregwu dị ọcha bụ n'ezie mmalite. Agbanyeghị na tupu anyị agwa gị na ejiri mara naanị ọnụnọ ha naanị n'ịntanetị, lee, ha na-eme ya ha nwere ụlọ ahịa anụ ahụ. N'ezie, ọ bụ naanị nke ha nwere.
Ihe nlereanya a ga - efunahụ, n'ihi na azụmaahịa ndị dị n'ịntanetị na - agbasokarị, yabụ inwe ụlọ ahịa nkịtị iji nye ọrụ agaghị abaara onye ọ bụla uru.
Ndị Egwuregwu dị ọcha: Pịa & Mita
N'ikpeazụ, ị nwere nhọrọ a, nke ugbu a bụ nke nwere ike ịhụ ngwa ngwa. Anyị na-ekwu maka ya ụlọ ọrụ ndị nwere ụlọ ahịa anụ ahụ na ụlọ ahịa dị n'ịntanetị. Na agbanyeghị na anyị kwuburu na ọdịnihu na-aga naanị eCommerces, ọtụtụ azụmaahịa nwere ọnụ ọgụgụ abụọ a.
N'ezie, a maara na Amazon chọrọ ịmalite ịtọlite ​​ụlọ ahịa anụ ahụ, n'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na ihe nlereanya ya bụ otu n'ime echiche kacha nso na echiche nke "ndị egwuregwu dị ọcha."
Dịka ị pụrụ ịhụ, ndị egwuregwu dị ọcha nọcha taa. Mgbanwe ya na ụlọ ahịa anụ ahụ bụ eziokwu, ọ bụ ezie na anyị amaghị ihe ga-eme n'ọdịnihu.
Ihe doro anya bụ na ha bụ eziokwu na ọtụtụ azụmaahịa na-apụta na ọkwa dijitalụ ma e jiri ya tụnyere nke anụ ahụ n'ihi uru ha na-enye.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » eCommerce » Ọzụzụ ECommerce » Ndị egwuregwu dị ọcha